TTSweet: ဂျူဂျူးနဲ့3bears ပုံပြင် ...
ဂျူဂျူးနဲ့3bears ပုံပြင် ...
ခရီးက ပြန်ရောက်လာပြီး သမီးစာမေးပွဲက ဒီတစ်ပတ်လုံး ဆက်တိုက် ဖြစ်နေတာနဲ့ ဘလော့မှာ အသစ်မရေးနိူင်သေးလို့ အရင်ကရေးဘူးတဲ့ ဂျူဂျူး၎နှစ်လောက်က အကြောင်းလေး ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဂျူဂျူ ပထမဆုံးစဖတ်တတ်တဲ့ ပုံပြင်လေးမှို့ အမှတ်တရပါပဲ။
0riginal picture link
တစ်နေ့က သမီးကျောင်းကနေ ပုံပြင်စာအုပ်လေးတစ်အုပ် ယူလာတယ်။ စာအုပ်လေးနာမည်က" Goldilocks and the3Bears " တဲ့။ ကျောင်းမှာ ဆရာမက ခဏခဏ ဖတ်ပြဟန်တူပါရဲ့။ သမီးကလည်း အလွတ်ရနေပြီး ပုံပြင်ကို အစအဆုံး ဖတ်ပြတတ်နေပြီ ...
ပုံပြင်လေးကဒီလိုပါ။ Goldilocks ဆိုတဲ့ ခလေးမလေးက သူ့အမေပြောစကားကို နားမထောင်ပဲနဲ့ လျှောက်သွားတာ တောထဲမှာ လမ်းပျောက်သွားပါတယ်။ တောထဲမှာ အိမ်လေးတစ်အိမ်တွေ့တော့ အိမ်ပိုင်ရှင် ၀က်ဝံမိသားစု အပြင်ထွက်သွားတုံး မနက်စာပြင်ထားတဲ့ ဆန်ပြုတ်ကို ၀င်စားပါတယ်။ ၀က်ဝံအဖေကြီးရဲ့ပန်းကန်ကို စားကြည့်ပြီး too hot ၊ ၀က်ဝံအမေရဲ့ပန်းကန်ကို စားကြည့်ပြီး too cold ၊ ၀က်ဝံခလေးလေးရဲ့ပန်းကန်ကို စားကြည့်ပြီး Just right ဆိုပြီး ဆက်စားပါတယ် ... ကုလားထိုင်၊ ကုတင် အစရှိသဖြင့် တက်အိပ် ၊ ထက်ထိုင်ကြည့်ပြီး too hard, too soft သူနဲ့အတော်ပဲဆို Just ... right လို့ပြောပြီး အိပ်ရာပေါ် တက်အိပ်ပါတယ်။ ၀က်ဝံမိသားစုပြန်လာတော့ သူတို့အိပ်ရာပေါ်မှာ အိပ်နေတာတွေ့တာနဲ့ ဖမ်းမယ်အလုပ်မှာ သူလဲကြောက်လန့်တကြား ထွက်ပြေးပြီး လွတ်သွားပါတယ်။ နောက်ပိုင်း သူ့အမေစကား နားထောင်တော့မယ်လို့ အဆုံးသတ်ထားပါတယ်။
မိဘစကားနားထောင်ဖို့ သင်ခန်းစာအပြင်၊ အင်္ဂလိပ်လို ဆန့်ကျင်ဘက် စကားလုံးတွေနဲ့ " အနေတော်ပဲ " ဆိုတာကို ခလေးတွေ နားလည်အောင် သင်ပေးတဲ့ ပုံပြင်လေးပါ။ သမီးလေးက ကျောင်းက ဆရာမပြောတဲ့ လေသံအတိုင်း " Just " နေရာမှာ သံရှည်လေးဆွဲပြီး ... Just ~.... right လို့ ဆိုပြပါတယ်။ အင်မတန် ချစ်စရာ ကောင်းပါတယ်။ သမီးအသံလေး နားထောင်ကောင်းလွန်းလို့ ခဏခဏဖတ်ခိုင်းရတာလဲ အမောပါပဲ။ ဒါ့အပြင် သမီးက အပြင်ကိစ္စတွေမှာလဲ အဲဒီစကားလုံးကို အသုံးချတတ်ပါသေးတယ်။ ဥပမာ သူ့အ၀တ်တွေကို ၀တ်ပြီး too big, too small, Just right အစရှိသဖြင့် ပေါ့၊ နိူင်းယှဉ်စရာ တွေ့တိုင်း သူတတ်သလောက်မှတ်သလောက် ပြောနေတော့တာပါပဲ။
ဟိုတစ်နေ့ကတော့ သမီးလေးဂျူဂျူဟာ မဆွိတီတို့အခန်းထဲ စာဖတ်တဲ့နား လာဆော့ရင်းကနေ ပါးစပ်က အငြိမ်မနေ " Just ~.... right " ... "Just ~.... right " ဆို သူ့အသံရှည်လေးနဲ့ လာပြောနေပါတယ်။ မဆွိတီလဲ သူရှေ့က ဘာပြောသွားတာလဲ သေချာ မကြားလိုက်လို့ သမီး မေမေ့ကို ဘာပြောလိုက်တာလဲ ဆိုတော့ ... သူ ပြန်ပြောလိုက်တာက ...
"ဂျူဂျူ -ီ-ီး ပေါက်လိုက်မိတယ် ... မေမေ ... ဂျူဂျူ့ -ီ-ီးကလေ ... သိပ်လဲ မနံဘူး ... သိပ်လဲမမွှေးဘူး ... Just~ ... Right ..............." တဲ့။
ပထမတော့ ကိုယ်လဲ ကြောင်သွားတယ်။ နောက်မှ သူပြောတာ စေ့စေ့တွေးကြည့်မှ သမီးကြီးတော်ရော မဆွိတီရော ရယ်လိုက်ရတာ ... အူကိုနာရောပဲ ... စဉ်းစားကြည့်ကြပါအုံး ... ပိတ်သတ်ကြီးရယ် ... သိပ်လဲမနံ ... သိပ်လဲမမွှေး ... အနေတော်ဆိုတဲ့ ... -ီ-ီး အနံ့ ဘယ်လို အနံ့ဖြစ်မလဲဆိုတာ ...
အိမ်ကဥာဏ်ကြီးရှင် ဂျူဂျူ နဲ့ မှပဲ ... ... ...
Posted by T T Sweet at 3:28 PM
မြူးမြူး July 20, 2010 at 5:06 PM
HAHA... JUJU.. SOOOO CUTE!
ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ July 20, 2010 at 5:52 PM
ရီသွားတယ် မမ... :)
just ... right
har har...... so funny...
cute Jue Jueee....lay.
Anonymous July 20, 2010 at 7:22 PM
love ju ju
Sonata Cantata July 20, 2010 at 9:25 PM
ရှူသွား... အဲလေ ဖတ်သွားပါတယ်
တီဆွိ.. ဂျူဂျူအကြောင်းတွေ ရေးမှတ်ထားတော့ သူကြီးလာရင် ပြန်ဖတ်လို့ရတယ်...
Anonymous July 20, 2010 at 10:25 PM
cute juju. i love her so much.
Rita July 20, 2010 at 11:00 PM
ဒီလိုလေးတွေ မှတ်ထားလို့ ရတယ်။
ရွှေရတုမှတ်တမ်း July 20, 2010 at 11:05 PM
ကလေးတွေရဲ့ အတွေးဟာ တခါတလေ လူကြီးတွေတောင်လိုက်မမှီဘူး..မယ်ဆွိရေ...ဖတ်ရတာ...just right ပါပဲ....
လသာည July 21, 2010 at 8:39 AM
Racial Harmony day မှဟာသ
Junior Leader ဂျူဂျူ ...
Thesis -> Virus -> Thesis
ဆီသတ်ချက်တဲ့ ရယ်ဒီမိတ် မုန့်ဟင်းခါး
အဖေ့သမီး ဂျူဂျူ ...
အသွင်တူ အတူနတ်ပြည်ရောက် ...